PressReader - Ilanga: 2018-02-12 - I-DISTRUCTION BOYZ ISINAMACIKO NGAPHANSI KWAYO
I-DISTRUCTION BOYZ ISINAMACIKO NGAPHANSI KWAYO
Ilanga - 2018-02-12 - Izindaba - LUCKY CAIN
LETHULE inkampani namaciko eliwasayinile iqembu elishisa izikhotha kulezi zinsuku iDistruction Boyz, emcimbini wekhethelo obuseThe Joint, eThekwini ngoLwesine.
Leli qembu, ebelenze umcimbi wokujabulela ukuhlabana ngendondo yaseNigeria, lenze umcimbi lapho belimeme khona ozakwabo kulo mkhakha, izikhulu zikamasipala nosomabhizinisi abasemkhakheni wezokungcebeleka.
Kulo mcimbi iDistruction Boyz imemezele ukuthi isinenkampani yayo ebizwa ngeDistruction Boyz Records.
Echaza ngale nkampani, uSamkelo Mpisane - oyimenenja yaleli qembu - utshele izicukuthwane ukuthi ukusungula kwabo le nkampani kusho ukukhula kubona futhi bazimisele ukunika amanye amaciko ithuba lokuvelela njengoba nabo belinikiwe.
“Siyabonga ukwesekwa esikutholile kusukela singena kulo mkhakha nangendlela abantu abasamukele ngayo. Kusho lukhulu kithina ukubona umculo wegqom’ ukhula ngale ndlela,” kusho uMpisane odume ngelikaSkillo.
Ube esethula amaciko amabili abawasayinile kwiDistruction Boyz Records, uSibusiso Khumalo (obizwa ngoK.Dot) noMbuso Zindela (obizwa ngoBlaqrythm).
Uncome kakhulu ikhono labo kwezokudidiyela enanela ngokuthi ukuba nabo enkampanini kuzoba nomthelela omuhle kakhulu.
Kulo mcimbi kuphinde kwethulwa ne- music video yengoma ethi: ‘Ithawula’ ebihlanyisa abantu ngesikhathi samaholidi kaKhisimusi.
U-DJ Sox ukhuthaze leli qembu ukuba lizimisele liyibambe noma insimbi isishisa, liqhubeke nokubeka iTheku ebalazweni lomhlaba.
Kulo mcimbi kumenyezelwe ukuthi leli qembu lithole isimemo esiyisipesheli eSpain nase-Ibiza kanti kulindeleke ukuba lihambele namanye amazwe aphesheya kwezilwandle.
Amalungu aleli qembu, okunguThobani “Que” Mgobhozi noZipho “Goldmax” Mthembu, azibongelile nawo ngokwesekwa kwawo nangokuhlomula ngendondo yangaphandle kwakuleli.
Baphinde bamemezela ukuthi abantu mabalindele indumezulu yomcimbi ozobe ubizwa ngeGqom In Concert ozokwenzeka maduze.